Inja yeLabrabull: Ulwazi Lokuzala, Isimo Sezulu, Imidlwane Nezithombe - Izinhlobo
Inja yeLabrabull: Ulwazi Lokuzala, Isimo Sezulu, Imidlwane Nezithombe
I-Labrabull ayinakwenzeka unqamule phakathi kweLabrador Retriever neAmerican Pitbull Terrier .
Ubungeke ucabange umhlobo onabazali abaziwa ngokuba nemimoya ehluke ngokuphelele.
AmaLabradors ayaziwa ngobungane bawo, anothando futhi anentshisekelo yokujabulisa imvelo kanti iPitbull iphezulu, iyavikela futhi ithembeke ngokweqile.
Kodwa-ke, inja yeLabrabull inamandla okwenza isilwane esikhulu somndeni.
Ukuzuza ifa lohlangothi olunothando nolunobungane lweLabrador, ngamandla nokudlala kwePitbull, kusho ukuthi ngeke kukuthathe isikhathi eside ukuthandana nalolu hlobo.
Uma lokhu kuzwakala njengenja yakho, funda-ke ukuthola okuningi mayelana: nesimo sabo, ukuthi ungabathenga kuphi nokuthi ungabanakekela kanjani!
ILabrabull Ikhule Ngokugcwele nokubukeka
Umhlahlandlela Wokunakekelwa KweLabrabull
Lezi zinja zinobungane njengeLabrador futhi zivikela njengePitbull.
Ichazwe njengezidlakela ezimnene, iLabrabulls inesimo esihle sokuhlalisana kahle nabantu nezinye izilwane.
Noma bobabili abazali babenjalo okhuliswe njengezinja ezisebenzayo , le hybrid ibhekwa njengenja ehambisana nayo.
Zingeza kahle kunoma yimuphi umuntu noma umndeni obheka inja eqotho.
Ama-Labrabulls bayinja yomklami , okusho ukuthi bayinhlanganisela yabazali ababili abamsulwa.
Amakilabhu amaningi amakhulu ezinja awaziboni izinja zabaqambi njengohlobo lwazo njengoba kungaba nokuhlukahluka okuningi uma kukhulunywa ngenzalo yazo.
Lokhu kunjalo ngeLabrabull futhi.
I-American Kennel Club ayiluboni lolu hlobo, kepha iRegistry Registry yaseMelika ingenye yezimbalwa ezenzayo.
Uma ucabanga ukwamukela enye yale midlwane ethandekayo, nazi ezinye izinhlangano ezinikele ekusindiseni le nhlanganisela:
I-Pittie Love Rescue
I-Bully Paws Pitbull Patriots
Ukutakulwa Kwelab YaseMelika
Ukulondolozwa kwe-Bull Bull
Imvelaphi yeLabrabull ayaziwa njengoba iyi-hybrid entsha impela; kepha ngokuqonda umlando wabazali bayo singakwazi ukwazi uhlobo kangcono kangcono.
Ukubuyisa kweLabrador babevela eNewfoundland eCanada lapho basebenza khona njengezinja zokubuyisa ikakhulukazi abadobi futhi ekugcineni babe ngabazingeli.
Namuhla bayaqhubeka nokuntshontsha izinhliziyo zabantu baseMelika njengenye yezinhlobo zezinja ezithandwa kakhulu.
Noma kunjalo kuyinja esebenzayo, zivame ukusetshenziswa njengezinja zamaphoyisa ezihogela, izinja zokwelapha nezinja zensizakalo.
ILabrador yazalelwa imvelo yayo emnene, iPitbull yaqala ukukhuliswa ngesizathu esihluke kakhulu.
Kade isetshenziselwa inkunzi nokubheja , okwakuyimidlalo enolaka.
Lapho nje le midlalo isivinjelwe, iPitbull yaba yinja epulazini ebheke indawo yabo futhi inikezela ubudlelwane emindenini.
ILabrabull inezimfanelo ezizuze njengefa kubazali babo bobabili ezingabonakala kohlobo lwanamuhla: bathembekile, bayasebenza futhi bahlakaniphile.
Usayizi Abesilisa (ama-intshi angama-22 kuye kwangama-24) nabesifazane (amasentimitha angama-20 kuye kwangama-22)
Isisindo Abesilisa (amakhilogremu angama-75-95) nabesifazane (amakhilogremu angama-45 kuye kwangama-60)
Isikhathi sokuphila Iminyaka eyi-10 - 14
Ifanele i- Imindeni esebenzayo nama-Singletons
Ukuhluka Kwemibala Mnyama, Mpofu, Mhlophe, Mpunga, Ukhilimu, Isiliva Noma Ukuhlanganiswa
Isimo Uthembekile, Uyasebenza, Uhlakaniphile, Unothando futhi Unothando
Amanye Amagama I-Pitador, iBullador, iLab-Pit nePit-Lab
Funda kabanzi mayelana ne-Pitbulls ngokulanda umhlahlandlela wamahhala we-Pit Lab Mix .
Le midlwane ethandekayo idinga ukuhlangana okuningi nokuqeqeshwa ukuze ibe yizinja ezilinganiselayo.
Njengenjwayelo nenja eyi-hybrid, ngenxa yokwehlukahluka kofuzo , ngeke wazi kahle ukuthi yini ongayithola.
Ungazithola usune- umdlwane obukeka njenge-Pitbull (kanye nesimo seLabrador) noma ungathola okuphambene.
Njengabo bobabili iLabrador noPitbull, umdlwane wakho uzokhula ngokushesha futhi uzofinyelela ekuvuthweni cishe lapho unezinyanga eziyi-12 ubudala, kepha, uzoqhubeka nokukhula aze abe neminyaka emibili ubudala.
Lapho uthenga kumfuyi weLabrabull, umdlwane weLabrabull ungabiza noma yikuphi kusuka ku- $ 200 kuya ku- $ 1,000.
Ukwehluka kwamanani kuncike kwisizinda somzali, ukufunwa nombala wejazi; umbala omnyama umbala ovame kakhulu ngakho amajazi alula (isb. amhlophe, ukhilimu noma isiliva) azobiza kakhulu.
Osayizi be-Litter bangaba bukhulu impela, kusuka emidlwane emihlanu kuya kweyishumi.
Ubudala Ubuncane (Iphawundi) Ubukhulu (Iphawundi)
3 izinyanga 10 ishumi nanhlanu
Izinyanga eziyi-6 22 25
Izinyanga eziyi-9 27 30
Izinyanga eziyi-12 30 37
Isimo sabo somusa singamangaza abanye (njengoba beyingxenye yePitbull). Noma kunjalo, Izinja zePitbull ngokuvamile aziqondakali kahle .
Abaningi bababona njengenja enolaka, kepha lokhu akulona iqiniso.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ayikho into efana nenja enolaka kepha ukukhuliswa kabi okuholela ezinja kulaka.
AmaLabrabulls ayavikela futhi athembekile emndenini wawo, ngakho-ke angaba kude noma akhonkothe ​​kubantu angabazi. Lapho sethulwe kahle, konke abazokucela kungukuhlikihla esiswini noma umdlalo wokulanda!
Bathanda ukujaha ngakho-ke bangadinga isikhumbuzi esiyinqaba sokungagijimi ezinye izilwane ezincane njengamakati noma izingwejeje.
Le nja yenza isilwane esikhulu somndeni!
Ngabantu abajabulayo nabanothando uhlangothi lweLabrador okuxubene nokudlala kwePitbull, akumangalisi ukuthi kungani benza umlingani ophelele womndeni.
ILabrabull ehlangene kahle ixhumana kahle nabantu bayo yonke iminyaka kubandakanya nezingane.
Akusho kodwa qiniseka ukuthi izingane zakho ziyazi ukuthi zidlala kanjani nenja enkulu ngaphandle kokuzikhungathekisa.
Okufanayo kuhamba nezinye izilwane nezinja, uma Wahlangana kusukela esemncane akufanele ube nezinkinga zokwethula le nja ekhaya lakho lomndeni ... noma ngabe usuvele unezilwane ezifuywayo.
Ama-Labrabulls amnandi kakhulu futhi athanda ukudlala, anobungane ezinganeni nakwezinye izilwane ngokufanayo.
Bazofuna konke ukunakwa okuvela emndenini nakubangane, nabo abangasakwazi ukwenza lutho ngaphandle kokubathanda emuva .
Lezi zinja zinasohlangothini oluvikelayo kuzo, kwesinye isikhathi ikhombise yona ngendlela yobudlova , kepha-ke lokhu akuvamile, njengoba iningi lizogwema ukubhekana ngeziqu zamehlo.
Bayinzalo ehlakaniphile nethembekile ethanda ukujabulisa umuntu wabo ngakho-ke uma unemhlane wabo ungaqiniseka ukuthi bazoba nabakho.
AmaLabrabulls anamandla kakhulu, ayathanda ukubhukuda futhi adlale ukulanda.
Ukuphakama kwabo nesisindo sabo kuncike kakhulu yimuphi umzali abamlandela kakhulu .
Kodwa-ke, kusuka kubazali abaphakathi kuya kwabakhulu, le nja ibhekwa njengenja ephakathi nendawo futhi.
ILabrabull yakho ingalinganisa phakathi kwama-intshi angama-20 kuye kwangama-24. Abesilisa bavame ukukhula babe ngamasentimitha angama-24 kanti abesifazane kuze kufike kuma-intshi angama-22.
Isisindo sabo sizohluka kakhulu, okulula kakhulu kube amakhilogremu angama-45 kanti anesisindo esinzima kakhulu esingamaphawundi angama-90.
Ubukhulu besisindo nenja kufanele nakanjani kube njalo kucatshangelwe lapho kusetshenziswa , awufuni ukuqeda ngenja enkulu kunaleyo ongakwazi ukuyiphatha noma ukuyifaka.
AmaLabrabulls maningi amathuba okuthi athathe izici zomzimba zeLabrador; inja enomzimba wokugijima enebala elithambile .
Kodwa-ke, kungenzeka ukuthola ezinye ngomzimba onemisipha nokho othambile wePitbull.
Okwabo amehlo almond alimise zingangena ngombala onsundu noma nge-hazel namakhala azo ngamnyama noma nsundu futhi.
Izici ezigqamile zenhlanganisela yeLab Pitbull ukumakwa okumhlophe esifubeni, kwizidladla nethiphu yomsila.
Ubuhle be-crossbreeds bavame ukuza ngemibala eminingi njengoba abazali babo beyizinhlobo ezimbili ezihlukene futhi nemibala nayo ingahlanganiswa.
Lezi zinja ziza ngemibala ehlukahlukene kusuka kokumnyama, mpunga, okumhlophe, onsundu, ophuzi nesiliva.
Njengoba kushiwo, inja yakho ingaba nokuhlanganiswa kwale mibala enezimpawu ezimhlophe.
Ukubukeka okujwayelekile kweLabrabull kumnyama ngesifuba esimhlophe, izidladla nethiphu yomsila.
Ijazi labo lingavela ngemibala ehlukahlukene kodwa futhi nemibala. Umbala onsundu ungasuka kushokholethi omnyama uye konsundu ophakathi nendawo. Ngokufanayo, umbala ophuzi ungangena ngegolide, i-tan noma i-fawn
Ukulandela abazali babo banejazi elifushane eliqondile elincane, okusho ukukhishwa okukhanyayo kuya kokulingene.
Ukusakazwa ngokusobala kuzokwanda phakathi nezinyanga ezifudumele uzofuna ukunikeza amabhulashi ambalwa angeziwe ngakho qiniseka ukuthi ikhaya lakho alihlanganiswa nezinwele.
Ezinye izinja zingaphikisana nokulungiswa ngakho ukuqala inqubo ngenkathi zisencane kufanele kusho ukuthi awunankinga.
Ngejazi elifushane, iLabrabull idinga kuphela ukuxubha kanye ngesonto ngebhulashi le-bristle ukuqeda noma yiziphi izinwele ezifile ezilele nxazonke.
Ukugeza kufanele kwenziwe kuphela uma kunesidingo, kepha-ke uma ubona ukwanda kwephunga kufanele usebenzise i-doggy shampoo .
Izindlebe kufanele zihlolwe kanye njalo emasontweni amabili ukuthola izimpawu zokubomvu kanye nephunga, ezingakhombisa ukutheleleka. Izipikili nazo kufanele zisikwe njalo emavikini amabili noma uma uqala ukuzwa izinzipho zichofoza phansi.
Amazinyo nawo adinga ukuhlanzwa kabili noma kathathu ngesonto ukugwema izifo zamazinyo nokuphefumula kabi.
Ayilungele abanikazi bezinja okokuqala ngqa, ngoba badinga ukuzijabulisa okuningi nomuntu onolwazi lokuphatha ukuze abafundise okulindeleke kubo.
Ilungele kakhulu umndeni osebenzayo, onazo noma ongenazo izingane, le nja enomusa kodwa ehlosile idinga umuntu onolwazi lokuqeqesha inja evelele.
Umhlahlandlela Amakholori ayi-1,500
AmaLabradors adume ngokuhaha futhi ayakuthanda ukudla kwawo!
Ngakho-ke qala ngezinto zokuqala, qiniseka ukuthi awudluli i-Labrabull yakho ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokudla.
Badinga inani elikhulu lamaprotheni asuselwa enyameni ekudleni kwabo, ngakho-ke ukufaka inhlanganisela yokudla okusemathinini nokomile kusenesikhathi kuzoqinisekisa ukuthi bakhula babe ngabantu abadala abajabule futhi abanempilo.
Cishe izinkomishi ezintathu zokudla usuku ngalunye zizozinikeza izakhamzimba namandla anele; usabalalise lokhu ekudleni okubili okuncane ngosuku ukugwema ukuqunjelwa.
Kubalulekile ukuthi iLabrabull yakho ithole ukuzivocavoca umzimba okwanele ukuze ihlale iphilile.
Cishe ihora lokuzivocavoca usuku ngalunye lilungele le nja.
Amanzi yindawo ejabulisayo yeLabradors! Bangabadobi abanesiphiwo ngokwemvelo futhi bathanda ukusakazeka okuhle!
Uma kukhona amachibi noma imifula endaweni, ukuvumela inja yakho ukuthi ihambe iyobhukuda kuyindlela enhle yokuthi bathole ukuzivocavoca umzimba nsuku zonke.
Inja yakho nayo iyohlala ibonga njalo uma ubayisa epaki yezinja.
Ngeke bathande ukugijima mahhala kuphela, kepha uma behlangana kahle, bazothanda ukudlala nezinye izinja.
Lezi zinja zingaba ngamabomu futhi zibe namandla, ngakho-ke zidinga umphathi wezinja onolwazi ongazifundisa.
Ukuqeqeshwa kokulalela kanye nokuxhumana nabantu kufanele kuqale kusukela besebancane, ngoba kulapho-ke lapho bezofunda khona kakhulu.
Ziyi-smart zohlobo ngakho-ke kufanele zikujabulele ukuqeqeshwa, kepha azikuthandi ukuphindaphinda okuningi. Ngakho-ke gcina izikhathi zibe zincane futhi zingashayi ukuze bangabi nesithukuthezi futhi balahlekelwe yintshisekelo.
Ukuhlafuna kungenye yezinto zokuzilibazisa eziyintandokazi kuLabradors namaLabrabulls awahlukile.
Zama futhi uvimbele lokhu lapho besebancane ngokuqiniswa okuhle, kepha uma beqhubeka nokwethula ithoyizi elihlafunwayo futhi ubakhuthaze ukuthi bahlafune lokho esikhundleni sefenisha yakho.
Isimo esivame ukubonakala ezinjeni ezinkulu yi-hip dysplasia; lesi yisimo esiwohlozayo ngakho-ke kancane kancane bazokuthola kunzima ukuhamba.
I-Dysplasia ivamile kumaLabradors ngakho-ke nayo ingazuzwa njengedlwane lakho.
Esinye isimo sempilo esivamile eLabradors yi-bloat, eyaziwa nangokuthi i-Gastric Dilatation-Volvulus . Yilapho-ke lapho isisu siqala ukusonteka kuso futhi sisongela impilo.
Isifo sokuwa ne-Hypothyroidism nazo ziyizimo okufanele uzibheke.
ILabrabull inja ephakathi nobukhulu obukhulu ngakho-ke bahlala cishe eminyakeni eyi-14 ubudala.
Le nja inesimo esihle, ihlangana kahle nezingane, ezinye izilwane ezincane nezinja.
ILabrabull iyinhlobo enhle yalabo abafuna inja yabo elandelayo! Isimo sabo sobungane nesokudlala sisho ukubamukela emndenini ngeke kube yinkinga.
Badinga ukuzibandakanya kusenesikhathi, ukuqeqeshwa kanye nomuntu okwazi ukuphatha inja enkulu engahle ibe namandla.
Ilungele indlu ematasa (enabantu abaningi) futhi nangcono ekhaya lapho bengathola khona ukuhamba kwabo kwansuku zonke nokubhukuda ngezikhathi ezithile!
Sazise ukuthi ucabangani ngalo mngani onoboya kumazwana angezansi.
Ama-Dog Puns angama-67 Azokukwenza Uhewule
ukugqoka amahanisi enja enjeni encane
umalusi waseJalimane omude ongenazinwele
ucingo olude olunezinwele olude olunezinwele dachshund
ukuthi ungazi kanjani ukuthi ngine-pitbull enjani
umalusi waseJalimane hlanganisa nempisi